တာချီလိတ် - တာလေသွားလမ်းပေါ်ရှိ မယ်ယန်းပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးအား စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
Eastern Shan *
Northern Shan *
Southern Shan *
တာချီလိတ် - တာလေသွားလမ်းပေါ်ရှိ မယ်ယန်းပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးအား စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ
Writen by Tachileik News Agency 6:31:00 PM -0Comments
မြန်မာ - ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသ၊ တာချီလိတ် - တာလေသွားလမ်းပေါ်ရှိ မယ်ယန်းပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် မိုင်းကိုးဘက်မှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား စိတ်ကြွဆေးပြား (၂၄၀၀)နှင့် အတူ ၂၀၁၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၆)ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ မိနစ်(၄၀)၀န်းကျင်အချိန်က ဖမ်းဆီး ရမိ၍ တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်း အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
မယ်ယန်းပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၃၀)တာချီလိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့က တာလေဘက်မှ တာချီလိတ်ဘက်သို့ လာသည့် ယာဉ်များအား ရပ်တန့်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် မိုင်းကိုးဘက်မှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာသည့် အိုက်ပြိုးအား ရပ်တန့်စစ်ဆေးရှာဖွေရာက စိတ်ကြွဆေးပြားများကို တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသက်(၃၅)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိ အိုက်ပြိုး စီးလာသည့် ဆိုင်ကယ်၏ တူးဘောက်အတွင်းမှ Wy စာတမ်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြား စုစုပေါင်း (၂,၄၀၀)ကို တွေ့ရှိ သိမ်းဆည်းရမိ၍ တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းတွင် မယ(ပ)၁၀၄/၂၀၁၉၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၉(က)ဖြင့် အမှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မွနျမာ - ထိုငျးနယျစပျဒသေ၊ တာခြီလိတျ - တာလသှေားလမျးပျေါရှိ မယျယနျးပူးပေါငျးစဈဆေးရေးဂိတျတှငျ မိုငျးကိုးဘကျမှ ဆိုငျကယျဖွငျ့ လာသညျ့ အမြိုးသားတဈဦးအား စိတျကွှဆေးပွား (၂၄၀၀)နှငျ့ အတူ ၂၀၁၉ခုနှဈ သွဂုတျလ(၆)ရကျနေ့ နလေ့ညျ(၁)နာရီ မိနဈ(၄၀)ဝနျးကငျြအခြိနျက ဖမျးဆီး ရမိ၍ တာခြီလိတျမွို့မရဲစခနျး အမှုဖှငျ့စဈဆေးနကွေောငျး သိရသညျ။
မယျယနျးပူးပေါငျးစဈဆေးရေးဂိတျတှငျ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၃၀)တာခြီလိတျမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးအဖှဲ့တို့က တာလဘေကျမှ တာခြီလိတျဘကျသို့ လာသညျ့ ယာဉျမြားအား ရပျတနျ့စဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျနစေဉျ မိုငျးကိုးဘကျမှ ဆိုငျကယျဖွငျ့ လာသညျ့ အိုကျပွိုးအား ရပျတနျ့စဈဆေးရှာဖှရောက စိတျကွှဆေးပွားမြားကို တှရှေိ့သိမျးဆညျးရမိခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ပူးပေါငျးအဖှဲ့မှ ရှာဖှစေဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျရာတှငျ အသကျ(၃၅)နှဈဝနျးကငျြရှိ အိုကျပွိုး စီးလာသညျ့ ဆိုငျကယျ၏ တူးဘောကျအတှငျးမှ Wy စာတမျးပါ စိတျကွှဆေးပွား စုစုပေါငျး (၂,၄၀၀)ကို တှရှေိ့ သိမျးဆညျးရမိ၍ တာခြီလိတျမွို့မရဲစခနျးတှငျ မယ(ပ)၁၀၄/၂၀၁၉၊ မူး/စိတျပုဒျမ ၁၉(က)ဖွငျ့ အမှုဖွဈဆောငျရှကျထားရှိကွောငျး သိရှိရသညျ။
Tachileik News Agency (TNA) is an independent multimedia news service and web – based source of daily news. It aims to createamore open media environment and facilitate access to information for concerned Myanmar citizens and focus on commitment to the highest standards of objective, accurate journalism. It is founded since 25th November 2009 and covering events and issues that are neglected by mainstream media. Do not allow to copy without permission from TNA.
Copyright © 2015 ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net All Right Reserved Site Online Counter